अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा एक नेपाली विद्यार्थी बेप'त्ता, खोजी गर्दै प्र'हरी ! —
अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा एक नेपाली विद्यार्थी बेप’त्ता, खोजी गर्दै प्र’हरी !
अस्ट्रेलिया / अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा एक नेपाली विद्यार्थी बे’प’त्ता, खोजी गर्दै प्र’हरी ! सिड्नीमा एक नेपाली विद्यार्थी नवीना महत बे’पत्ता भएकी छिन् । शनिवार ३० नोभेम्बर देखि सम्पर्क बाहिर रहेकी उनलाई प्र’हरीले खोजी गरिरहेको छ । नवीना आइतबार दिउँसो करिब पौने पाँच बजे सिड्नीको रेडफर्न स्टेसनमा देखिएकी थिइन् । त्यसपछि उनी सम्पर्कमा छैनन् । १९ वर्षीय नवीनाले कालो जुत्ता, कालै पाइन्ट र कलेजी रङ्गको टिसर्ट लगाएको प्रह’रीले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । प्रह’रीले आफ्नो तर्फबाट सम्भावित ठाउँहरूमा खोजी गर्ने कार्य र उनको फोनका आधारमा उनको अहिलेको अवस्था विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । बैंक्सटाउन प्रहरी कमाण्डले उनको विाष्यमा थप जानकारी भएमा प्रहरीलाई दिन अपील गरेको छ । तपाईंसँग नवीनाको बारेमा थप कुनै जानकारी छ भने तपाईंले क्राईम स्टपर्सको नम्बर १८००३३३००० मा फोन गरेर दिन सक्नुहुनेछ । स्रोत : एमएन टिभी
यो पनि पढ्नुहोस ! यसरी खोज्नुहोस् अस्ट्रेलियामा काम ! यी हुन् सहयोगी वेबसाइटहरू ! हेर्नुहोस्
मेलबर्न। अस्ट्रेलियामा नयाँ विद्यार्थीहरूको लागि सुरुमा काम पाउन गाह्रो पर्छ । यस अवस्थामा विभिन्न वेबसाइट तथा कामदार एजेन्सी मार्फत काम पाउने सम्भावना रहन्छ । त्यसको सहयोगको लागि यहाँ सय वेबसाइटहरू उल्लेख गरिएको छ ( वेबसाइटमा जानको लागि दिइएका वेबसाइट सर्च गरि हेर्न सक्नुहुनेछ ) ।
10 . Hays
19. Apply Direct
20. Michael Page International
24. Randstad Australia
26. NSW Health
27. Chandler Macleod Group
30. Accor Jobs
31. APS Jobs
34. Care Careers
37. Drake International
38. Working in Australia
39. Au Local Gov Job Directory
41. Adecco Australia
46. Australia Wide Personnel
52. Page Personnel
55. Byron Employment